Namoaka Didy Miaro Ilay Tranonkala Mpanesoeso Voasivana Fito Taona Ny Fitsarana Breziliana · Global Voices teny Malagasy
Namoaka Didy Miaro Ilay Tranonkala Mpanesoeso Voasivana Fito Taona Ny Fitsarana Breziliana
Voadika ny 10 Jolay 2017 18:37 GMT
Vakio amin'ny teny English, English, Français, Español, Português
Peta-tsary namboarin'ny mpirahalahy Bocchini, nosoloina ny tavan'i Otávio Frias Filho – tompon'ny gazety Folha de São Paulo – ny tavan'i Darth Vader. CC 2.0
Taorian'ny ady ara-pitsarana naharitra fito taona, nanapa-kevitra hiaro ny tranonkala Breziliana mpanesoeso nosivanina tamin'ny taona 2010 ny Fitsarana Ambony ao Brezila — fanapahan-kevitra manantantara izay mamarana ny raharaha malaza indrindra amin'ny sivana an'aterineto Breziliana.
Tranonkala mpaka tahaka an'ny iray amin'ireo gazety lehibe indrindra ao amin'ny firenena, Folha de S. Paulo ny tranonkala Falha de São Paulo, izay naorin'ireo mpirahalahy Lino sy Mario Bocchini tamin'ny taona 2010. Kilalaon-teny amin'ny teny hoe “folha” (midika hoe taratasy na gazety amin'ny teny Portiogey) sy “falha” (midika hoe tsy fahombiazana) ny lohateny.
Namoaka sary namboarina maneso ny gazety Breziliana izy ary nahitana “famokarana lohateny”, ahafahan'ny mpitsidika mamorona vaovao noforonina miaraka amin'ny typografian'ny gazety sy ny bikany ankapobeny.
Ny fikasan'ny mpamorona dia ny hisarika ny saina amin'ny fitantarana diso ny fifidianana tao Brezila tamin'ny taona 2010 voalaza fa navoakan'ny Folha. Mitady hanome tombony ny fomba fijery sy antoko ara-politika afovoany-ankavanana ny gazety.
Rehefa tao amin'ny aterineto nandritra ny 17 andro monja ny tranonkala, nahazo didy voalohany hahazo lamandy R $ 1000 ( 300 dolara Amerikana tamin'ny Jona 2017) isaky ny andro mahavelona ny tranonkala ny fianakaviana Frías, tompon'ny Folha de São Paulo. Nilaza ny fitoriana fa naka tahaka ny marika sy ny firafin-tsary ny gazety ary nampiasa izany ara-barotra ry Bocchini mirahalahy .
Nametraka fitoriana ny registro.br (izay mitantana ny anaran-tsehatra rehetra miafara amin'ny .br) ihany koa ny orinasa, hanafoana ny sehatra falhadesaopaulo.com.br mba tsy hisy afaka misoratra anarana amin'izany.
Tamin'ny 21 Jona 2017, nofoanan'ny Fitsarana Ambony ny didim-pitsarana teo aloha momba ny raharaha izay nanamafy ny fitorian'ny fianakaviana Frías, ary namoaka didy miaro an-dry Bocchini mirahalahy ny Fitsarana Ambony, mamela azy ireo hamerina indray ny tranonkala amin'ny aterineto.
Tamin'ny vato efatra ka manohitra ny iray, namoaka didy ny fitsarana fa ny lalànan'ny fizakana (brevet) dia mamela ilalana ny zo haka tahaka am-panesoana sy ny zo tsy hanaja fatratra sy ho afa-miala voly.
Nilaza ny lalànan'ny zon'ny mpamorona ny Mpitsara Luís Felipe Salomão, voalohany tamin'ny tsy nanaiky ny didim-pitsarana teo aloha, izay manome fahalalahana haka tahaka amim-panesoana “raha toa ka tsy mamerina tanteraka ny asa orizinaly izany.” Hoy koa izy tamin'ny latsa-batony:
Ny zavatra nampiasain'ny Falha, izay neken'ny fitsarana ambony mihitsy, dia fanakianana ny fomba fijery ara-potokevitra sy ara-politika ny Folha, tsy misy fikasana hampiroborobo tantara hafa mety hifaninana. Mifototra amin'ny zava-misy tsotra izany fa tsy mampiseho tantara mitovy tadiavin'ny mpanjifan'ny Folha.
Tsy mbola nanapa-kevitra ry Bocchini mirahalahy raha hamerina indray ny tranonkala ao amin'ny aterineto na tsia.
Tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ny gazety Amigos Caros, hoy Lino Bocchini hoe:
Ho ratsy tanteraka izany raha nandresy ny teorian'izy ireo milaza fa resaka fihariana fotsiny izany – tsy misy fotony izany satria tsy nisy ny faneva ara-barotra, tsy misy dokambarotra, tsy misy zavatra namidy
Nankasitraka ny fanapahan-kevitry ny STJ ny fikambanana ONG Article 19, izay miady ho amin'ny fahalalahana maneho hevitra manerantany
Ho an'ny fikambanana, ny dingana ara-pitsarana dia nifototra tamin'ny tsy fahazakan'ny gazety ny fanakianana mivantana namelezana azy .
Amin'izay heviny izay, maneho fandresena ho amin'ny zo maneho hevitra an-kalalahana ny didim-pitsaran'ny STJ tamin'ny Alarobia ary tokony heverina ho toy ny “jurisprudence” amin'ireo tranga hafa mitovy amin'izay izay mety hitranga eto amin'ny firenena.